Amazinyo egolide / ama-Grill - Popular Jewelry
I-grill eyisithonjana yavela ngawo-1980 ngesikhathi seminyaka esanda kuqala ye-hip-hip. Imiklamo elula kakhulu yesikhathi esidlule iguqukele ekubeni yinkimbinkimbi njengoba imboni yobucwebe yenza intuthuko kancane ezindleleni zayo. Iminyaka engama-30, Popular Jewelry ubelokhu ehamba phambili ekuklanyeni kobucwebe ngokwezifiso; Ama-grill nawo ayehlukile. Kusuka kukepisi elilodwa kuya kugolide eligcwele umlomo nedayimane— Popular Jewelry ubenze bonke.
Ama-grill wethu ngokwezifiso - izwi elivela kithi.
Njengesixwayiso: lezi akuzona lezo ezi-grills ezi-flimsy, generic, size-size-all-grills- zenzelwe uku-oda; inkambiso eyenzelwe oyigqokile. Zizolingana kuphela iklayenti ababenzelwe bona. Wake wasibona isiqephu sobugebengu lapho bezama ukufanisa iphrofayili yamazinyo yomzimba namarekhodi amazinyo abantu abalahlekile? Yebo, kuvela ukuthi leyo yindlela evivinyiwe futhi eyiqiniso; iphrofayili yamazinyo yomuntu ihlukile njenge-DNA yakhe. Egameni lobugagu nekhwalithi, senza ama-grill ethu abe mkhulu futhi aqine ukuwahlukanisa nalawo womncintiswano wethu. Uma uboleka ukumamatheka okucwebezelayo kubangani bakho bezimbongolo eziphukile, maningi amathuba okuthi bazogcina benokuhwaqabala okubi esikhundleni salokho- kusukela kulowo mthethosivivinywa wamazinyo bathole ukulungisa amazinyo abawacwile bezama ukuphoqa i-grill yakho ukuthi ivuleke. Njengabo bonke ubucwebe obenziwe ngobuciko obenziwe ngekhwalithi, ama-grill wesiko enziwa ngokunaka kakhulu imininingwane nobuciko. Ama-grill ethu aqala ku- $ 150 (ama-single single cap caps) bese enyuka esuka lapho. Yenza amazinyo akho enze kahle. lapha. Ngaphandle komuntu ophakathi nendawo. Kwenziwe ngokuziqhenya eNew York.
Imininingwane edingekayo nezinto okufanele uzicabangele lapho ufaka i-oda lakho nathi.
1) Amazinyo aphezulu noma aphansi? (Phezulu / Wake)
2) Mangaki futhi ngamaphi amazinyo? (Abahlaseli, amaCanines, amaMolars)
3) Yikuphi uthayiphe metal eziyigugu? (ISterling Isiliva, Igolide (10K, 14K, 18K), IPlatinamu)
4) Uhlobo luni lombala? (Rose, Mhlophe, Yellow)
5) Uhlobo luni lokuqeda? (Emihle, Matte, njll)
6) Design Imininingwane? (Ubuso obugcwele / Ubuso obuvulekile / Isikhala / njll.)
7) Ingabe wena uthanda ukuba isethi ayigugu kubo?
Yiluphi uhlobo nombala?
8) Uma ukwazi, sicela uthumele umdwebo / sketch / isithombe / isithombe ukuze usisize siqonde ukuthi hlobo luni lomklamo owufunayo.
9) Ngabe uhlela ukuthi noma yimuphi umsebenzi wamazinyo wenziwe ngamazinyo akho maduze (lokhu kungathinta indlela abahlangabezana ngayo kamuva). Sincoma yikuphi okusele / izinqubo eziqhubekayo zamazinyo okumele agcwaliswe ngaphambi kokufaka i-oda hlupha nathi ukuqinisekisa fit isikhathi eside grillz yakho.
I-Green Diamond Custom Grill
I-Solid Bottom Eight-Teeth Laser Eqoshwe i-Grill
I-One-Cap Open Window
Ama-Grill aphezulu we-Plain egcwele ayisithupha (Igolide Eliphuzi / Igolide Elimhlophe)
I-Grill Plain Egcwele ngokugcwele
Iced-Out Large Gap w / Ozimele (IDayimane Elimhlophe; I-Pavé Stonesetting)
Ofeleba iced-Out (White Diamond; badedele Stonesetting)
I-Engravings yangokwezifiso (izinhlamvu zeKanji ze- "Demon")
Custom Engravings (insangu Leaf)
I-Engravings ngokwezifiso (i-Playboy Bunny)
Imiklamo Yamadayimane Ajwayelekile (Isiphambano)
Uthuli lwedayimane / Uhlaka oluvulekile lomugqa
Izikhukhula ezigcwele ngokuphelele (amatshe akhangayo; isafire legolide namapinki apinki)
I-Iced-Out Open Frames
Amafreyimu weDayimane-Cut Open
Uthuli lwedayimane (amathoni amabili)
Ama-fangs ama-Classic Polished
Ukudonsa (umugqa ongezansi kuphela)
Udaka lwedayimane (Isiliva)
Ibha ye-Iced-Out (ukuhlelwa kwamatshe esiteshi; imigqa emi-2)